Igbo Radio - News Reports in Igbo Language - Igbo Radio - News, Reports and Interviews in Igbo Language
Search ... Mba Taịwan eduola nwanyị mbụ bụ onye ndu n’iyi ọrụ	Details	Written by Igbo Service, Voice of Nigeria, Lagos	Friday, May 20, 2016	Nwaada Tsai Ing-wen, onye zọrọọkwa n’okpuru otu Democratic Progressive Party nwetere mmeri kpụọkụ n’ọnụ na ntụli aka e mere n’ọnwa JenuwarJanuarị.
Read more ...	Ndị agha mba Irak eburula ọgụ gakwuru ndị ISIL	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, March 02, 2015	Anyị na-anụ na ndị agha gọọmenti mba Irak amalitego ịlụsa ndị otu agha iyi egwu ahụ a na-akpọ ISIL n’aha achafụ ọgụ kpụ ọkụ n’ọnụ. N’ọnụ mmiri okwu onye Praịm Minista mba ahụ, “Taa, n’ike nke Chineke, anyị na-amalite ọgụ...
Read more ...	Ụwa nile amatago onye otu ISIS ahụ na-afọnye ndị mmadụ mma n’akpịrị	Details	Written by Chidi Igwe	Thursday, February 26, 2015	Ndị ọrụ nchekwa ekwuola na ha achọpụtago onye bụ nwoke onye otu ISIS ahụ a na-ahụ n’ihe onyonyo ndị otu agha iyi egwu ebe ọ na-afọnye ndị mmadụ mma n’olu. Nwoke ahụ a ma ama dịka Jihadi John, onye na-afụ onwe ya mmanwụ mgbe ọ bụna ọ pụtara n’ihe onyonyo maka igbu mmadụ, egbuona mmadụ ole n’ole ndị nta akụkọ.
GUCHAA AKUKO A...	A kpachapuru anya gbanyuo akara ngwa mgba ama MH370	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, March 15, 2014	Onye isi ọchịchị mba Maleshịa, Najib Razak, ekwuole na e nwere ịhe mere mmiri jiri baa n'opi ụgbọgụrụ. Ha achọpụtago na akpachapụrụ anya gbanyụọ akara ngwa mgba ama di n'ụgbo-elu Boeing 777 ndị mba Maleshia ahụ a na-achọ achọ kemgbe otu izu ụka.
Read more ...	Ogu ebirila oku na Syria: Amerika ga-eziga ngwa agha	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Ọgụ ahụ na-aga n’ihu na mba Syria kemgbe ọnwa ole n’ole ebiri la ọkụ. Nke a malitere kemgbe abalị abụọ mba Amerịka malitere kwadowe ndị otu rebel ahụ na-ebuso gọọmenti Bashar Al-Assad agha.
Read more ...	Ihe mberede ugboelu egbuola mmadu 120 na Pakistan	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, July 04, 2014	Ozi anyị siri n’aka ndị MSNBC nwete n’akọwa na otu ụgbọelu bu ihe karịrị mmadụ 120 dara n’ihe mberede ụgbọelu na Pakistan.
Read more ...	Alaomajijiji egbuole otutu mmadu na Japan	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, July 04, 2014	A na-achọ puku kwuru puku ndị mmadụ achọ na Japan kemgbe mba ahụ nwere oke ala ọma jijiji nke ndị ọka mmụta tinyere na 8.9 n’ogo mgbakọ ala ọma jijiji n’ụbọchị Fraịdee.
Read more ...	Onye isi ala mba South Koria agbaala arụkwaghị m	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, April 28, 2014	Aka na-achị mba South Korịa, bụ Chung Hong-won e werena aka ya rituo n’ọchịchị. Nke a na-eme n’ihi otu ndị mmadụ siri na-akakpọ gọọmenti ya maka usoro ha siri kpa agwa gbasara ndị obodo ha ahụ nwụrụ n’ihe mberede ụgbọ mmiri. Mgbe ọ na-agwa ndị mba ahụ okwu, Chung Hong-won kwuru n’akwa ya na-ebere ezi n’ụlọ niile ndị ịhe mberede a metụtara anarago ya ụra n’anya.